Image caption Waddooyinka caasimadda Muqdisho
Maamulayaasha Soomaaliya waxay maanta oo Axad ah bilaabeen olole ujeeddadiisu tahay sidii hal milyan oo carruur ah iskuullada loogu diri lahaa dalkaas ay dagaalladu burburiyeen, sidaas waxaa sheegtay hay'adda daryeelka carruurta ee Qaramada Midoobay, UNICEF.
Ololaha loo bixiyay iskuulka aad waxaa uu iskumar ka bilaabanayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee Somaliland iyo Puntland ee Hargeysa iyo Garowe. Ololahan oo socon doona muddo saddex sano ah waxaa loola jeedaa inay waxbarasho ka helaan rubac ka mid ah dhallinyarada aan hadda kahor fursadda u helin inay waxbartaan, ayay sheegtay UNICEF.
Saddexda sano ee mashruucani soconayo waxaa ku baxaysa lacag dhan 117 milyan oo dollar, taasoo ay ku jirto dhismaha iskuullo iyo dayactirka kuwii hore u jiray. Waxaa kaloo ka mid ah shaqaaleyn macallimiin wax ka dhiga dugsiyada iyo tababarradooda, iyo ku tababariida farsamada iyo mihnadaha ee carruurta iskuullada ka weynaadey iyo barnaamijyo gaar ah oo wax lagu barayo beelaha xoola dhaqatada ah.
Soomaaliya oo dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyay ku dadaaleysay sidii ay uga soo bixi lahayd dagaalkii sokeeye waxay ka mid tahay waddammada adduunka ugu hooseeya carruurta iskuullada tagta, sida ay sheegtay UNICEF iyadoo hay'addu xustay in afar ka mid ah tobankii carruur ah ay iskuul aadaan.
Qaar badan oo ka mid ah carruurta Soomaalida way ka dib dhacaan waqtiga loogu talagalay inay waxbarashada bilaabaan oo ah lix jir, qaar kalana dhaqso ayay waxbarashada uga haraan.
wakiilka UNICEF ee Soomaaliya, Sikander Khan, waxaa uu sheegay in waxbarashadu ay fure u tahay mustaqbalka Soomaaliya oo horeba ay uga soo luntay ugu yaraan waxbarashadii labo fac. Waxaana uu intaas raaciyay in dhallinyarada oo wax la baro ay ka mid tahay siyaabaha ugu fiican ee gacan looga geysan karo nabadgelyo iyo ammaan ka dhaca dalka Soomaaliya.